Nginike isikhathi sokuphumula yasungulwa ngo-2017 ngenhloso yokuletha ukuhlaziywa kanye nezindaba zakamuva ze- umhlaba we-movie kubasebenzisi bethu be-Intanethi. Lapha uzothola inombolo enkulu yama-athikili mayelana namafilimu azo zonke izifundo, kanye nomhlaba womculo. Kusuka ku- umlando womculo, izinkokhelo zomculo, udlula ezindabeni zakamuva ezivela kumaqembu afanele kakhulu esikhathi sethu nakwamanye angaphambilini.
Zonke lezi zindatshana zikhiqizwe yithimba lethu elihle lababhali, ongalibona ngezansi. Uma ufuna ukujoyina ungaxhumana nathi ngokusebenzisa ifomu elilandelayo. Uma, ngakolunye uhlangothi, ufuna ukubona lonke uhlu lwezihloko ezihlanganiswe kusayithi futhi luhlelwe ngezigaba, ungavakashela leli khasi.
Ngiyawathanda ama-movie nomculo. Ngikunake njalo ukukhishwa okusha, kungaba kwi-Intanethi, komagazini, ... noma yini! Enye yezinhlelo zami ezinhle kakhulu ukuchitha intambama enobuvila nomuntu engimthandayo ... Kuhle kakhulu. Futhi ngiyakujabulela ukubhala nokwabelana ngakho konke engikwaziyo mayelana nokwenzekayo emhlabeni wezokungcebeleka.